Weather in Thailand tamin'ny Desambra ~ Journey-Assist - Vanim-potoana. ny orana. aiza no aleha
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Таиланд » Toetany sy toetrandro any Thailandy » Weather in Thailand tamin'ny Desambra
Weather in Thailand tamin'ny Desambra
Miaraka amin'ny toetr'andro, tonga ny firenena amin'ny fizahan-tany "avo". Miakatra ny vidin'ny fiaramanidina rehefa manakaiky ny Taom-baovao sy Krismasy, ary hotely iray lafo vidy no tokony hosokafana volana maromaro alohan'ny fitsangatsanganana, raha tsy izany dia misy loza mihoa-pampana. Ny toetr'andro amin'ny volana Desambra, raha ny marina, dia mety ho an'ny karazana fialam-boly rehetra: amoron-dranomasina, mavitrika, eo amin'ny rano sy any an-tendrombohitra. Ny mari-pana isan'andro eo amin'ny firenena dia eo amin'ny +24 degre, miankina amin'ny faritra, mety ho mafana kokoa na mangatsiaka kokoa ny andro.
Ny fepetra amin'ny Desambra
Na dia hitohy any amin'ny faritany avaratr'i Thailand aza ny dia, akanjo mafana ihany no ilaina ho an'ny mpiondana bus misy rivotra. Ny toetrandro manodidina an'i Chiang Rai dia mety amin'ny fizahan-tany. Ny tolakandro dia miakatra hatramin'ny +27 degre ny rivotra, ary tsy misy orana. Amin'ny fiandohan'ny ririnina, ny tsy ampoizina tsy ampoizina dia voahilika.
Any amin'ny faritra afovoan-tany, any Bangkok sy Ayutthaya, ny haavon'ny rivotra mandritra ny andro dia tsy mihoatra ny +30 degre. Tsy ny orana tsy milatsaka na dia kely monja aza. Desambra dia tena malaza tokoa ireo mpizahatany avy any Eropa izay manandrana mankany Bangkok amin'ny krismasy. Noho izany antony izany, mihamitombo ny fidiran'ny mpivarotra ary miaraka amin'izany dia manala ny vidin'ny efitrano fandraisam-bahiny aho, ho an'ny manofa moto sy ny taxi-be ao an-tanàna. Tamin'ny volana Desambra, ny orinasam-piaramanidina maro no manao sidina mivantana amin'ny seranam-piaramanidina Pattaya kely. Ity dia mety tsara ho an'ny mpizahatany miaraka amin'ny ankizy, saingy aza adino fa ny sidina mivantana an'ny charter toy izany dia mihoatra ny sidina mahazatra amin'ny fifindrana. Amin'ny volana Desambra any Pattaya, ny fidiran'ny mpizahatany. Tsara ny andro ho fialan-tsasatra tsara: ny mari-pana dia eo amin'ny +30 degre, mafana ny rano ao amin'ny Hoalan'i Thailand ka hatramin'ny +29.
Ny toetr'andro any amin'ny morontsiraka atsimo-andrefan'ny ranomasina Andaman dia tsara amin'ny fialantsasatra amoron-dranomasina ary fandaharana fitsangantsanganana be dia be. Milamina ny ranomasina ary mazava ny masirasira, ny filatsahana varatra be dia be mandritra io vanim-potoana io, ny ranomasina, kintana, hedgehog ary trondro tropika no hita tsara ao anaty rano amin'ny halalin'ny 10 metatra sy mihoatra. Tsy mihoatra ny +31 degre ny antonne isan’andro isan’andro, ary amin’ny alina eo amoron-tsiraka, dia azo atao ny rano mihena hatramin’ny +23 degre. Mafana sy be fitiavana ny ranomasina. Amin'ny fo mahaliana +29 azo atao, tsy afaka miala aminy mandritra ny andro. Ilaina ihany ny miaro ny tenanao amin'ny masoandro mafana miaraka amin'ny satroka sy tarehy sunscreen miaraka amina fiarovana avo lenta.
Raha ny momba ny toetr'andro any amin'ny nosy Koh Samui, Tao sy Pranang dia toa mampivarahontsana tokoa. Amin'ny ankapobeny, ambany ny tahan'ny toetrandro sy ny orana, fa amin'ny tapany faharoa amin'ny volana eto amin'ity faritra ity, misy onja mahery any amin'ny ranomasina ary rivotra mahery. Ny mari-pana amin'ny rivotra Samui dia mitovy amin'ny mari-pana amin'ny rano any amin'ny Hoalan'i Thailand, manomboka amin'ny +29 ka hatramin'ny +30 degre.
Endrika fitsaharana amin'ny volana Desambra
Noho ny zava-misy fa ny vanim-potoana fialan-tsasatra "avo" dia mifandraika amin'ny fialantsasatra manan-danja amin'ny mponina ao Eropa sy Azia, ny fangatahana hotely sy sidina amin'ny volana Desambra dia avo be. Famandrihana trano sy fividianana tapakila fiaramanidina dia volana vitsivitsy mialoha ny dia efa nomanina. Ny sahy any an-toerana dia mampiasa am-pitiavana izany ary mampiakatra ny vidin'ny hotely, trano fandraisam-bahiny, taxi-be, menus ao amin'ny trano fisakafoanana malaza amin'ireo mpizahatany vahiny. Raha voafetra ny teti-pandrosoana dia azonao atao ny manemotra ny fitsangatsanganana amin'ny herinandro faharoa amin'ny volana Janoary, rehefa mihena kely ny “rivo-piainan'ny fizahan-tany” ao amin'ny firenena ary mihena kely ny vidiny.
Raha mikasa ny hianatra mandritra ny andro maromaro ao Bangkok ianao sy ny fipetrahany dia tokony handeha amin'ny Ayutthaya Day izay ankalazaina amin'ny volana Desambra ianao. Amin'ny andro fialantsasatra dia ho gaga amin'ny renivohitra sy ny varotra ary ny fialamboly maro ny renivohitry ny Fanjakan'i Siam.
Aiza no hiala sasatra any Thailandy amin'ny volana Desambra?
1 andro (17.0 mm.)
10 andro (155.1 mm.)
1 andro (21.4 mm.)
11 andro (243.4 mm.)
2 andro (33.6 mm.)
10 andro (154.3 mm.)
10 andro (154.9 mm.)
1 andro (18.8 mm.)
9 andro (127.9 mm.)
10 andro (154.4 mm.)
10 andro (145.9 mm.)
2 andro (27.8 mm.)
3 andro (36.4 mm.)
2 andro (32.5 mm.)
10 andro (184.9 mm.)
14 andro (217.6 mm.)
2 andro (28.6 mm.)
1 andro (21.1 mm.)
10 andro (208.4 mm.)
2 andro (26.7 mm.)
11 andro (162.3 mm.)
11 andro (242.5 mm.)
11 andro (243.5 mm.)
10 andro (146.9 mm.)
10 andro (146.4 mm.)
15 andro (329.7 mm.)
10 andro (207.5 mm.)
10 andro (147.0 mm.)
2 andro (34.3 mm.)
11 andro (216.7 mm.)
1 andro (21.5 mm.)
10 andro (205.4 mm.)
12 andro (203.1 mm.)
10 andro (147.6 mm.)
1 andro (17.6 mm.)
11 andro (238.3 mm.)
10 andro (129.0 mm.)
7 andro (123.5 mm.)
11 andro (241.3 mm.)
2 andro (27.4 mm.)
9 andro (168.8 mm.)
1 andro (26.1 mm.)
1 andro (27.6 mm.)
11 andro (242.8 mm.)
2 andro (27.5 mm.)
11 andro (242.2 mm.)
3 andro (61.5 mm.)